Mgbe Ị gara ihi ụra dị mkpa karịa ogologo oge ị na-ehi ụra
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Mgbe Ị gara ihi ụra dị mkpa karịa ogologo oge ị na-ehi ụra
Ndị na-eme nchọpụta na ZOE, ụlọ ọrụ sayensị ahụike, yana otu mba ụwa nke ndị ọkà mmụta sayensị ama ama gbasara ụra na metabolism sitere na UK, US, Sweden, Italy, na Spain, achọpụtala na mgbanwe site na oge ịlanarị mmadụ na-emebu (ya bụ, inwe ihe na-adịghị ahụkebe). n'ime abalị), yana ịlana ụra mgbe e mesịrị, n'ozuzu, na-ejikọta ya na nzaghachi glucose ọbara na-adịghị mma maka nri ụtụtụ ụtụtụ echi ya, nke nwere ike imetụta ahụike mmadụ na, n'aka nke ya, ibu ha.
Nchọpụta ọhụrụ ndị a bụ akụkụ nke ZOE PREDICT, ihe ọmụmụ sayensị gbasara nri na-edozi ahụ kachasị ukwuu n'ụwa, ma ebipụtala ya taa na akwụkwọ akụkọ European Diabetologia. Dị ka ọmụmụ ihe ọmụmụ ụra kachasị ukwuu nke ụdị ya - ihe dị ka ugboro iri buru ibu karịa ọmụmụ ihe atụnyere - mkpughe ndị a jikọtara ya na teknụzụ dijitalụ ọhụrụ nke ZOE ga-enyere ụlọ ọrụ ahụ aka ịnye ndụmọdụ ahaziri iche iji meziwanye ahụike na ịdị arọ nke ndị otu.
Etu ụzọ dị mkpa:
• Ụra dị mkpa maka ịhazi ahụ ike nke metabolic, yana nchikota nke ụkpụrụ ihi ụra izugbe na nke ahaziri iche nwere ike ịdị mkpa iji nyere ndị mmadụ aka ibelata ihe ize ndụ nke ọrịa metabolic, dị ka ọrịa shuga, ọbara mgbali elu (ọbara mgbali elu) na oke ibu.
• ZOE PREDICT bụ ọmụmụ ihe kachasị ukwuu n'ụwa iji kpokọta data miri emi, zuru ezu gbasara ụra na nri. Ọmụmụ ihe ọmụmụ a na-ahụ maka ụra bụ nke kachasị ukwuu iji ebumnuche nke ihi ụra, nlekota glucose na-aga n'ihu na ule ịma aka nke usoro metabolic.
• A na-ejikọta ụra abalị na-adịghị mma na nzaghachi shuga dị n'ọbara na-adịchaghị mma maka nri ụtụtụ n'ụtụtụ na-esote, n'agbanyeghị ụdị nri ụtụtụ nke onye ahụ họọrọ.
• Inwe usoro ihi ụra kwa izu na-ejikọta ya na njikwa shuga ọbara na-adịghị mma, nke nwere ike ibute ihe ịma aka ahụike dị mkpụmkpụ na ogologo oge.
• Nchọpụta nke ọmụmụ a nwere ike ịgwa usoro ndụ iji meziwanye ọkwa glucose ọbara mgbe nri gasịrị, na-elekwasị anya na usoro oge ịlanarị mbụ ma na-ebuli elu dị elu nke ụra na-akwụsịghị akwụsị.
Ọ dịla anya a mara ezigbo ụra abalị dị ka akụkụ bụ isi nke ndụ ahụike. Ọ bụ ezie na otú ụra si kwekọọ na nri na mmega ahụ, apụtabeghị nke ọma. N'ezie, ndị na-eme nchọpụta achọpụtala na ịrahụ ụra nke ọma ma ọ bụ nke nta nke nta na-ejikọta ya na njikwa shuga dị n'ọbara na-adịghị mma nke ndị nwere ọrịa shuga mana ókè mmekọrịta a na-enwe na ndị nwere ahụike ka amabeghị ruo ugbu a. Otu ndị nyocha nke ZOE jiri data sitere na ọmụmụ ihe ZOE PREDICT, ebe ndị ọrụ afọ ofufo 953 nwere ahụike gbasoro n'ime izu abụọ. N'oge a, ndị sonyere na-eri nri dị iche iche ahaziri ahazi, ma na-eyi glucose ọbara na ndị na-ahụ maka mmegharị iji tụọ nzaghachi shuga ọbara ha na ihi ụra (rịba ama: a naghị eji ụra eme ihe maka nnwale ahụ).
Ndị ọkà mmụta sayensị tụlere ngụkọta oge site na oge ndị sonyere na-ehi ụra ruo oge ha tetara, yana ogo ụra ha. Ha wee nyochaa usoro ihi ụra nke ndị mmadụ n'ime izu abụọ, wee jiri ha tụnyere nzaghachi shuga ọbara ha na-eri nri nwere ụfọdụ carbohydrates, protein na abụba.
Site na nyocha ha, ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtara na n'ofe ndị niile sonyere, ịlakpu ụra tupu oge eruo karịa ịrahụ ụra ogologo oge nwere ike ịka mma maka ahụike metabolic - ọnọdụ nke a na-atụle site na usoro ihe ndị na-egosi otú ị dị mma ugbu a, yana kedu ka ị ga-esi ebute ajọ ọrịa na-adịghị ala ala ma emechaa ndụ gị. Ndị sonyere n'ịlakpu ụra na-enwekarị nzaghachi shuga dị n'ọbara na nri ụtụtụ n'echi ya, ọ bụrụgodị na ha teta n'oge, ma e jiri ya tụnyere ndị na-arahụ ụra maka otu oge ma na-ehi ụra n'oge mgbede.
N'ịgbakwụnye, data ahụ kpughere na inwe nsogbu ihi ụra abalị jikọtara ya na nzaghachi shuga dị n'ọbara adịghị mma maka nri ụtụtụ n'echi ya. N'aka nke ọzọ, n'otu n'otu, ịrapagidesi ike n'usoro ihi ụra nke ọma na izere abalị na-adịghị ahụkebe butere nzaghachi shuga dị n'ọbara ka mma maka nri ụtụtụ n'echi ya. Nke a dị mkpa n'ihi na nzaghachi shuga ọbara na-adịghị mma mgbe ị risịrị nri ejikọtawo na ihe ize ndụ dị ukwuu nke ịmalite ịmalite ọrịa shuga 2 ma ọ bụ ọrịa obi.
Ọzọkwa, inwe usoro ihi ụra nke na-adịghị mma kwa izu yana oge ihi ụra na-agbanwe agbanwe na oge ihi ụra na-agbanwe agbanwe sokwa na njikwa shuga dị n'ọbara adịghị njọ. Nke a nwere ike inye aka ịkọwa 'social jetlag' bụ nke a na-ebute site na ngbanwe nke usoro ihi ụra nke ọtụtụ ndị na-enweta n'ụbọchị ezumike ha, ma e jiri ya tụnyere ụbọchị ọrụ, ma gosi na ọ na-ejikọta ya na ahụike adịghị mma, ọnọdụ ka njọ, na ụbara. ụra na ike ọgwụgwụ.
N'ikpeazụ, ndị otu ahụ chọpụtara na nnukwu abụba na nri nri carbohydrate dị elu mere ka nzaghachi shuga dị n'ọbara na-achịkwa nke ọma karịa ịṅụ mmanya na-egbu egbu. Nchọpụta a nwere ike ịba uru karịsịa maka ndị na-atụgharị na mmanya ike ma ọ bụ swiiti maka nri ụtụtụ dị ka ịchọta m mgbe chi jiri. Ọ bụrụ na a na-emeghachi ya mgbe niile, nzaghachi glucose ọbara na-adịghị mma nwere ike ibuli ihe ize ndụ nke nsogbu ahụike metabolic dị ka ọrịa shuga, oke ibu na ọrịa obi. Yabụ, idobe ọkwa shuga n'ọbara bụ akụkụ dị oke mkpa nke ịdị mma yana akụkụ bụ isi nke mmemme ZOE maka nke a.
Nsonaazụ ndị a na-egosipụta ọrụ dị mkpa nke ụra na-arụ na ọdịmma mmadụ na ikike iji nweta ndụ dị mma, yana mkpa ọ dị ịnweta ụra zuru oke, ịdị elu dị elu na uru ọ bara ịgbanyụ ọkụ na mbụ mgbe enwere ike.
Prọfesọ Paul Franks sitere na Mahadum Lund dị na Sweden, bụ́ onye ndú nke na-eme nchọpụta n’ihe ọmụmụ ahụ, bụrụkwa onye so na bọọdụ ndụmọdụ Sayensị Sayensị nke ZOE, kwuru, sị: “Nye ọtụtụ ndị mmadụ, ma oge ihi ụra na oge a na-enwe bụ ihe a pụrụ ịgbanwe, n’ihi ya ịbụ ụra na-adịghị, ma ọ bụ inwe usoro ihi ụra na-akpaghasị. ọ dịịrị anyị ka anyị gbanwee.” Franks gbakwụnyere, “Inweta ego site n'oge ịmụrụ anya na ịgbazinye ego ihi ụra anaghị eme na-enweghị ọmụrụ nwa. Ọbụna otu abalị na-emetụta otú ahụ anyị si eme ka nri na-edozi ahụ na otú e si achịkwa ọkwa shuga dị n'ọbara nke ọma.”
Dr. Sarah Berry, onye na-agụ akwụkwọ na sayensị nri nri na ngalaba nke sayensị nri na King's College, London, na onye ọkà mmụta sayensị na-ahụ maka nri na-edozi ahụ na ZOE, kwetara, "Ụra bụ ogidi isi nke ahụike n'akụkụ nri, mmega ahụ na ahụike uche. N'agbanyeghị nke ahụ, otu onye n'ime mmadụ atọ adịghị ehi ụra nke ọma. Ndị na-adịghị ehi ụra nke ọma nwere ihe ize ndụ dị elu pasent 40 nke ibu ibu ma nọrọ n'ihe ize ndụ dị ukwuu nke ọrịa obi na ọrịa shuga. Ndị otu a na-erikarị calorie, na-ahọrọ nri na-adịghị mma, enweghị ụdị dị iche iche na nri ha na-eri nri na-adịghị mma na obere eriri na mkpụrụ osisi na ihe oriri. Na nkenke, ọmụmụ ihe anyị na-egosi na ụra kwesịrị inwetakwu nlebara anya.”
Tim Spector, onye na-arụkọ ọrụ sayensị nke ZOE na prọfesọ na-ahụ maka ọrịa mkpụrụ ndụ ihe nketa na King's College London, kwuru, "Dị ka ọ dị n'ihe banyere nri, ọ dịghị ụzọ dabara adaba-niile iji kwado kpọmkwem oge ụra anyị. Mana, ugbu a anyị nwere ike ikwenye na e nwere usoro akwadoro maka mgbe na otu anyị si ehi ụra. " Spector gara n'ihu, "Ka ndị mmadụ nwee mmetụta nke ike na ntụkwasị obi na ikike ha nwere ime ihe na ahụike ha, agụmakwụkwọ dị oke mkpa. Nnyocha anyị dị oke ọnụ yana nghọta ahaziri iche nke ZOE na-enyere anyị aka izute ndị mmadụ n'ebe ọ bụla ha nọ na njem ha wee nye ha ụzọ sayensị kwadoro iji nweta mgbanwe na ime nke ọma. "
Ndụmọdụ ụra 5 Sayensị kwadoro iji kwado ahụike metabolic
• Nye iwu na-agbanwe agbanwe: Mepụta usoro ụra nke na-arụ ọrụ ma rapara na ya n'ime izu.
• Jiri ihe ndina gị mee ndoputa n'oge.
• Tọọ ọnọdụ ahụ: Gbaa mbọ hụ na ime ụlọ ahụ dị jụụ, gbara ọchịchịrị ma dị jụụ, zere iri ihe na ịṅụ ihe ọṅụṅụ n'abalị, ma hazie oge zuru ezu iji zuru ike ma zuru ike tupu ịkụ ahịhịa.
• Malite ụbọchị ziri ezi: Nsonaazụ sitere na nchọpụta ZOE's PREDICT na-egosi na ihe mmadụ na-eri dị mkpa dịka mgbe mmadụ na-eri. Ebe ọ bụ na mmetụta nke nri dịgasị iche iche n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu, jide nri ụtụtụ nke dị mma maka ahụ gị (chee echiche: mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri) karịa nri ụtụtụ nke nwere nnukwu carb maka nkwalite ume kachasị mma n'ụtụtụ.
• Mara ahụ gị: Were ule zuru oke nke na-achọpụta njupụta nke nje bacteria "dị mma" na "ọjọọ" na eriri afọ gị nke jikọtara ya na ahụike metabolic, yana ọbara shuga na abụba ọbara na-azaghachi nri ka ị nwee ike ịchịkwa gị. ahụike nke onwe.